Sawirka Sawirka: istock / JoeChristensen
Inta badan muraayadihii burburay iyo lebenkii dabka madoobaaday ayaa la jiiday. Hase yeeshe, dukaanno la fuulay iyo meelo bannaan ayaa wali hareeyay jidadka Minneapolis iyo St. Paul halkaas oo rabshado ay ka qarxeen xagaagii la soo dhaafay maalmihii dilkii George Floyd ka dib. Boqolaal dhisme ayaa la gubay oo la burburiyey, iyadoo la barakiciyey meherado iyo ururo markii horaba la daalaa dhacayey cudurka Covid-19 ee faafa.
Hadda bulshooyinku waxay diyaar u yihiin dib-u-dhiska, waxaana jira rajo wanaagsan oo ay ku qabsan karaan wax ka wanaagsan wixii markii hore jiray. Aasaaska 'McKnight Foundation' waa qeyb ka mid ah dadaal ballaaran oo lagu doonayo in xilligan lagu qabsado — hubinta in dib-u-habeynta ay horumarineyso caddaaladda midab-takoorka, ugu dambayntiina waxay mulkiilaha dhismaha ku dhiseysaa gacanta ururada maxalliga ah ee aan macaash doonka ahayn, iskaashatooyinka kireystayaasha, iyo shakhsiyaadka horumarinta Madow iyo dadka kale ee midabka leh.
"Farxad iyo yididiilo ayaa halkan ku jirta qaab aan hore u jirin," ayay tidhi Felicia Perry, oo ah agaasimaha fulinta ee West Broadway Business and Coalition Area.
McKnight wuxuu maal-galiyaa $5 milyan oo ah sanduuqa ku-meel-gaadhka ah ee Hantida Bulshada (CAT) oo ay maamusho Twin Cities LISC, xafiiska gobolka ee hay'adda horumarinta bulshada ee heer qaran ee Taakulaynta Hindisaha. Sanduuqa amaahda cusub ayaa iibsan doona hadiyadda waqtiga. Markii hantida maguurtada ahi u timaaddo iibinta xaafadaha dakhligoodu hooseeyo, mala-awaalayaasha dibedda ayaa inta badan la soo baxa lacag caddaan ah oo diyaarsan si ay ugu rogaan guryaha ama ay u dhisaan horumarro aan keenaynin waxa ay bulshada rabto. Inta ay hawshu socoto, waxay nuugaan macaashka iyo dakhliga kirada ka soo gala xaafadda.
Ururada Iskaashatada Bulshada
Hay'ada Horumarinta Xaafadaha Aurora St. Anthony
West Broadway Ganacsiga iyo Isbahaysiga Aagga
Bulshooyinka iyo ganacsiyada ay saameeyeen rabshadaha qarxay xagaagii hore ayaa diyaar u ah inay dib u dhisaan — iyagoo hubinaya in dib u habeynta ay horumarineyso caddaaladda midab takoorka, ugu dambeyntiina ay dhisidda lahaanshaha ku jirto gacanta ururada maxalliga ah ee aan macaash doonka ahayn,
iskaashatooyinka kiraystayaasha, iyo shakhsiyaad horumariya Madow iyo dad kale oo midab leh. Astaanta Sawirka: Molly Miles
"Sanduuqa wareejinta hantida ayaa awood u leh inuu dhaqso u dhaqaaqo, qabsado hantida, ka dibna u oggolaado isticmaalka ugu wanaagsan inuu ka soo baxo aragtida bulshada," ayuu yiri Eric Muschler, oo ah sarkaalka barnaamijka ee McKnight's Vibrant & Equitable Communities.
Marka la helo amaahda CAT, horumariyayaasha daneeya danta guud ee dadweynaha waxay awoodi doonaan inay u tartamaan dhismayaasha iyo baakadaha dhulka sida ugu dhakhsaha badan ee la helo. Sanduuqa ayaa la shaqeynaya dhowr khibrad u leh horumarinta bulshada aan faa'iido doonka ahayn, oo ay ku jiraan Bangiyada Twin Cities Land, Xarunta Horumarinta Xaafadaha, iyo Seward Redesign. Ururradu waxay ama horumarin doonaan guryaha ama ay hayn doonaan inta lagu jiro dhowrka sano ee ay ku qaadan karto la-hawlgalayaasha bulshada, oo ay ku jiraan kuwa wax dhisaya ee BIPOC, si ay u dejiyaan qorshe iyo maalgelin muddada fog ah.
"Ubucda dib-u-dhiskan is-beddelka ah waxaa iska leh dadka Madow iyo kuwa asaliga ah iyo dadka midabka leh," ayuu yiri Peter McLaughlin, oo ah agaasimaha fulinta ee LISC. "Taasi waa hadafka, maxaa yeelay taasi waxay dhistaa hanti iyo xakameyn."
Sanduuqa CAT waxaa lagu bilaabay $27.5 milyan oo ka kala yimid LISC, Hennepin County, JPMorgan Chase, Bush Foundation, Minneapolis Foundation, iyo McKnight. Deymaha ugu horreeya, oo loo qoondeeyay in la ansixiyo bishii Abriil, ayaa gacan ka geysan doona iibsashada guryaha ku yaal Lake Street iyo Chicago Avenue iyo Lake iyo Minnehaha Avenue, xuddunta mudaaharaadka xagaaga. Meelaha kale ee mudnaanta la siinayo ayaa ah isgoyska Chicago iyo E. 38th Street, halkaasoo lagu dilay George Floyd; West Broadway ee waqooyiga Minneapolis; iyo dhowr fidid oo ku teedsan Jaamacadda Avenue ee St. Paul, oo ay ku jiraan taariikh ahaan xaafadda Black Rondo iyo maqaayadaha iyo degmooyinka ganacsiga ee isku xidha bulshooyinka muhaajiriinta ah ee Afrika iyo Koonfur-Aasiya.
Ururada bulshada ee bahwadaagta waxay odorosayaan dhismayaal bixiya xafiisyo kiro ah oo yar iyo dukaanno loogu talagalay ganacsiyada barakacay qalalaasaha ka dib ama lagu qasbay in la xiro aafada darteed. Waxay rabaan boosaska kicinta ee BIPOC iyo ganacsatada soogalootiga ah iyo fursadaha kiraystayaasha inay ku yeeshaan guryaha. Waxay runtii rabaan guryo la awoodi karo iyo dhaqdhaqaaq dhaqaale oo firfircoon.
Taylor Smrikárova, oo ah maareeyaha mashruuca ee Seward Redesign oo raadinaya ku dhowaad labaatan guri, oo u badan hareeraha Lake iyo Minnehaha, ayaa yidhi: "Tani ma dhici doonto habeen keliya, laakiin hadda waxaa jira dareen ah inay dhici karto," Waxay rajeyneysaa maalgelinta CAT in loo isticmaali karo in lagu iibsado dhowr guri markay suuqa yimaadaan.
Mid ka mid ah iibiyeyaasha aan la hadlayno ayaa ku hanjabaya inay duminayaan guriga haddii aan lagu iibin qiimaha ay doonayaan, ayay tiri. "Sanduuqa CAT wuxuu noo ogolaanayaa inaan bixino qiimahan si looga hortago burburinta hantida bulshada."
“Ubucda dib-u-dhiska is-beddelka waxaa iska leh dadka Madow iyo kuwa asaliga ah iyo dadka midabka leh. Taasi waa yoolka, maxaa yeelay taasi waxay dhistaa hanti iyo xakameyn. ” —PETER McLAUGHLIN, LISC AGAASIMAHA FULINTA
Maalgelinta McKnight ee sanduuqa CAT, oo ay dib ugu bixinayso LISC 10 sano gudahood danaha 2%, waa qaab ka duwan sidii loo horumarin lahaa himilada aasaasiga ah ee ka baxsan bixinta. Kala-mudnaanta mudnaanta lahaanshaha maxalliga ah iyo BIPOC waxay si fiican ula jaanqaadeysaa himilada barnaamijka 'Vibrant & Equitable Communities' ee aasaasiga ah si "loo dhiso mustaqbal firfircoon dhammaan reer Minnesota oo leh awood wadaag, barwaaqo, iyo ka-qaybgal." Hogaamiyaasha bulshada sida Perry waxay hada arkaan fursado cusub oo aan horey loo heli jirin.
Lahaanshaha hantida iyo dhulka, waa wax aanan u helin sababo jira awgood, ayay tiri. "Hadda horumariyayaasheena Madow waxay helayaan qalab dhaqaale oo u oggolaan doona qoysaska oo dhan iyo jiilalka inay bilaabaan xiritaanka farqiga hantida."
LISC waxay ku talogashay kobcinta sanduuqa CAT iyada oo maalgelin laga helayo bangiyada dhaqameed iyo ilo kale lana abuurayo dhuumaha mashaariicda si loo dhiso xitaa hanti dheeri ah oo ka mid ah bulshooyinka taariikh ahaan aan la maalgelin.
"Tani waa abaabul badan oo ka socda shirkadaha gaarka loo leeyahay si wax looga qabto ajandaha sinnaanta jinsiyadeed ee aan ku arkay jiil ka badan," ayuu yiri McLaughlin. “Tani waa daqiiqad ku dhalatay xanuun ka dib dilkii George Floyd. Beel ahaanna, waa inaynaan iska daadin. ”
Mawduuca: Sinnaanta Caadi ahaaneed iyo Ka Qayb-qaadashada, Maalgashiga Saameynta, Bulshooyinka Feejignaanta & Sinnaanta ah